के तपाईले लक्षित ट्राफिक किन्नु पर्छ? | यातायात सम्बद्ध गर्न
वेब प्राप्त गर्दै वेबसाइट ट्राफिक खास गरी बढि उत्तेजित हुन सक्दछ जब तपाईंलाई लाग्छ कि वास्तवमा तपाईंले आफ्ना सबै स्रोतहरू थाकेका छौं। वा तपाईं लक्षित वेब ट्राफिक किन्नको लागि कि अन्यले चीजहरू तपाईंको लागि काम गर्न सक्दछन् किन्न सक्नुहुनेछ।
खरिद लक्षित ट्राफिक सुरुमा साईट क्लिक गर्न उत्तम विकल्प हुन सक्दछ विशेष गरी यदि यसको लागी उपयुक्त सामग्री छ र भयानक सुरूवात गर्नको लागि प्रत्यक्ष एक्सपोजर चाहिन्छ। त्यहाँ धेरै लक्षित ट्राफिक आपूर्तिकर्ताहरू छन् जुन तपाईं वेबमा छिटो फेला पार्न सक्नुहुन्छ र जसले तपाईंलाई बजेट-मैत्री दरहरूमा विभिन्न रणनीतिहरू प्रयोग गर्न सक्छ।
रूपान्तरणमा परिणत हुने उच्च सम्भावनाको साथ आगन्तुकहरू पाउनको अलावा, तपाईंको लक्षित ट्राफिकले तपाईंको साइटको गुणस्तर बढाउँदछ र त्यसैले खोज इन्जिनलाई बढाउँदछ र्याङ्किङ्ग। तपाईले सकेसम्म चाँडो लक्षित ट्राफिक प्राप्त गर्न सुरु गर्नुपर्दछ - जुन मध्ये एक विधि सम्मानजनक ट्राफिक बैंकबाट लक्षित ट्राफिक खरीद गर्नु हो।
लक्षित ट्राफिकले निश्चित विषयहरूको लागि तपाईंको अधिकार बढाउँछ। हामी यहाँ अनलाइन खोज ईन्जिन अधिकारको कुरा गर्दैनौं जुन त्यस पक्षको पक्ष हो जुन मानव साइट रिडरमा अवस्थित छ। यदि कहिल्यै तपाईंको साइट सदस्यता वेबसाइट हो जुन इमान्दारीसाथ साइट आगंतुक जानकारी देखाउँदछ, जो तपाईंको वेबसाइट देखापर्छ ती सम्भावितहरूले तपाईंलाई तपाईंको बजारको लागि अत्यन्त उपयुक्त वेबसाइट मान्दछन् जुन ट्राफिकको जानकारीको कारण (जुन केवल अनौंठो हुने आशा गरिन्छ। बजार)।
तपाईंले खरीद गर्नुभएको लक्षित ट्राफिक पनि सहबद्ध मार्केटिंग गर्न यसै गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाई निश्चित रूपमा केहि भेट्टाउनुहुनेछ जसले तपाईलाई लक्षित ट्राफिकको लागि मुख्यतया भुक्तान गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ वा तपाईले सहयोगीहरूसँग लिinking्क गरेर अझ उदार आय पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ (जुन अरू वेबसाइटहरूमा विज्ञापन ल्याएर वा बाहिर राखेर गरिन्छ)।
साइटको सफलता पूर्ण रूपमा निर्भर हुँदैन कि तपाईं खरीद गर्नुहुन्छ वा लक्षित वेब ट्राफिक हेर्नुहोस्। लक्षित ट्राफिक खरीद गर्नु भनेको वास्तवमै ध्यानको लागि भुक्तान गर्दैछ।
बसोबास गर्नुहोस् WordPress Plugins तपाईंको लागि के गर्न सक्दछ?
वा तपाईं लक्षित वेब ट्राफिक किन्नको लागि कि अन्यले चीजहरू तपाईंको लागि काम गर्न सक्दछन् किन्न सक्नुहुनेछ।
लक्षित ट्राफिक खरीद गर्नु पहिले साईट क्लिक गर्न उत्तम छनौट हुन सक्छ विशेष गरी यदि यो आकर्षक, प्रासंगिक सामग्री छ र केवल एक उत्कृष्ट सुरूवातको लागि प्रत्यक्ष एक्सपोजरको आवश्यकता छ। तपाईंले सकेसम्म चाँडो लक्षित ट्राफिक प्राप्त गर्न सुरु गर्नुपर्दछ - जुन मध्ये एक विधि विश्वसनीय ट्राफिक बैंकबाट लक्षित ट्राफिक खरीद गर्नु हो।
तपाईंले खरीद गर्नुभएको लक्षित ट्राफिक पनि सहबद्ध मार्केटिंग प्रदर्शन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। साइटको सफलता पूर्ण रूपमा निर्भर हुँदैन कि तपाईं खरीद गर्नुहुन्छ वा लक्षित वेब ट्राफिकमा जान्छ।